Madaxweynaha dalka Kenya oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay Garoonka Aadan Cadde – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa ka soo degay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweeyay Madax ka tirsan dowladda Somaliya.
Uhuru Kenyatta ayaa noqonaya Madaxweynihii labaad ee Afrikaan ah oo soo gaara Magaalada Muqdisho, kaasi oo ka qaybgalaya Xaflada Caleemo saarka Madaxweyne Farmaajo.
Ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyay salaan siinta Madaxda imaaaneyso ayuu Uhuru Kenyatta ka qaatay salaam Sharaf, iyadoo intaasi kadibna la soo galbiyay.
Dhamaan Madaxda timid waxa ay ku sugan yihiin garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta VIP-da, waxaana qoarshaha uu yahay hal mar in loo kaxeeyo xarunta Xaflada ay ka dhaceyso.
Horay waxaa u yimid Madaxweynaha dalka Jabuuti, Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya iyo masuuliyiin kale oo ka socday dowladaha Gobolka.
Xaflada Caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Somaliya ayaa la filayaa goor dhaw inay ka bilaabato hoolkii lagu qabtay Xarunta Doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya oo ka soo degay Garoonka Aadan Cadde